विभिन्न ठाउँमा नेबिसंघको मसाल जुलुस, प्रहरीसँगको झडपमा केहि घाईते (फोटोफिचरसहित) - Naya Pusta
विभिन्न ठाउँमा नेबिसंघको मसाल जुलुस, प्रहरीसँगको झडपमा केहि घाईते (फोटोफिचरसहित)
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २९, मंगलवार २१:३६
काठमाडौं । इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले देशव्यापी प्रदर्शन गर्नुका साथै मसाल जुलुस सहित प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाएको छ ।
गोंगबु चोकमा भेला भएका नेविसंघका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला जलाएका हुन् । त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच केहीबेर पुत्ला तथा झण्डा खोसाखोससमेत भएको थियो । यस्तै प्रदर्शनीमार्गको आरआर क्याम्पसमा पनि नेबिसंघले पुत्ला दहन गरेको छ ।
उता, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्ल बृद्धि र बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाईको बिरोध गर्दै नेविसंघ तनहुँले दमौलीमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको छ । मसाल जुलुस निकालेका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नथाभावी नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको हो । मेन चोकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्ने क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी बीच झडप हुँदा केहि बिधार्थी घाईते भएको नेविसंघ तनहुँले जनाएको छ ।
दुबै पक्षबीच झडप हुँदा दमौली बजार केही तनावग्रस्त हुन पुगेको थियो । पार्टी कार्यलयबाट निस्केको र्याली सफा सडक लाइन हुँदै दमौलि सफासडक मेन चोकमा पुगी कोटसभामा परिणत भएको थियो । कोटसभा ने.बि. संघ तनहुँ एवम् नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका महाधिवेशन प्रतिनिधि चुडामणि खनाल मूल्य वृद्धि फिर्ता को माग गर्दै बालकृष्ण ढुङ्गेल लाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
आजै साझँ प्रदेश नं ४ कै प्रमुख क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पनि नेबिसंघले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । जुलुसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि क्याम्पस गेट नजिकै प्रहरी र विधार्थीबीच झडप भएको नेबिसंघ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका इकाई अध्यक्ष दिपक वाग्लेले जानकारी दिए । झडपमा प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्दा केहि बिधार्थी घाईते भएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पूर्वसभामुख महरालाई ५ दिन थुनामा राख्न आदेश
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ ३० गते बुधबार
जनप्रतिनिधिको ‘तलब रोक्ने’ फैसलाप्रति प्रदेश सरकार असन्तुष्ट
सिङ्गो परिवार छाडेर उनी एक्लै ‘विप्लव’ तिर